Home Wararka Fahad Yasin oo ku wajahan Addis Ababa & Asmara
[XOG] Fahad Yasin oo ku wajahan Addis Ababa & Asmara [Sababta?]
Saraakiil sare oo ka tirsan NISA oo horkacayo Fahad Yasin & Kullane Jiis ayaa lagu wadaa in aay maalmaha soo socda tagaan magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara si loo dejiyo xiisadda ku saabsan Ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaadey Eritrea, kadibna la sheegay in qaarkood ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
Ilo dibloomasiyadeed ayaa MOL u xaqiijiay in wafdiga tegaya Addis & Asmara uu horkacayo Agaasimaha NISA lana doonayo in dalka dib loogu soo celiyo ilaa 1500 oo askari oo la doonayo in lagu qanciyo waalidiinta ay carruurta ka maqan yihiin.
Waxaa waalidiintaasi ay dalbadeen in lala hadalsiiyo carruurtooda, balse ilaa haatan taasi ma suuragelin. Arinta Ciidanka la geeyay Eritrea kadibna loo gudbiyay gobolka Tigray ayaa waxay dhaawac xooggan gaarsiisay xiriirka ka dhexeeya Qatar iyo Somalia.
Xukuumadda Dooxa ayaa ka xumaatey in ciidankaasi been loo sheegay, laguna khaldey in Qatar la geynayo, kadibna loo gudbiyay Eritrea, lagana qeybgaliyay dagaalka u dhexeeya Ethiopia iyo jabhadda TPLF.
Mareykanka ayaa hore u sheegay in ciidanka Somalia ee tababarka loogu qaadey Eritrea qaarkood la geeyay gudaha Ethiopia. Waxaa sidoo kale Horey Qaramada Midoobay u sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in ciidanka Somalia ee laga qaaday Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Waqooyiga Ethiopia.
Shacabka Soomaaliyeed waa inay u istaagaan in la helo warar sugan oo ku saabsan ruuxda ama raqda askarta la geeyay Tigray ee caawinayey Ciidanka Ethiopia.